tsipika fitaratra misy taratasy taratra taratra
Fanontana nomerika fitaovana Flex PVC
Ampiasain'ny mpanonta nomerika be indrindra amin'ny fanaovana pirinty Banners, Sign Boards, Pennants, X Banner Stands, Pull up Stands, Hoarding, Backdrops.
Tabilao- Soatoavina taratra Retro (Tsy misy fampiharana amin'ny Cones fifamoivoizana)
Ity horonantsary maharitra ity dia mety indrindra amin'ny fampiharana fiaramanidina maharitra sy motera maharitra ary manome safidy maivana sy ara-toekarena amin'ny loko.
Adhesive tena miaraka amin'ny membrane tsy misy bubble ho an'ny fampiharana maimaika haingana sy maimaim-poana! (Vonona hampiasa ivelan'ny boaty, tsy misy ranoka ilaina!)
Teknolojia fanasitranana tena (nanjavona ny gorodona). Manohitra ny famotehana, ny rano ary ny porofo simika.
Adhesive akrilika azo antoka, tsy manimba miaraka amin'ny fiainana 10 taona! (Tsy hihinana amin'ny alàlan'ny firakotra na hamaly amin'ny sehatra) Fampiharana sy fanesorana azo antoka!
Ity vinyl ity dia azo apetraka amin'ny alàlan'ny 3M 94 Primer sy 3M Edge sealer, tsy voatery izany, ireo vokatra ireo dia hampiroborobo ny adhesion ary hanampy fiainana ny vinyl anao. (Ny mpanisy tombo-kase na ny primer dia tsy hanala ny lakaoly, hanimba ny vinyl na hanimba ny endrika tsy toy ny sarimihetsika kalitao mora vidy kokoa).
Anaran'ny vokatra Vinyl misaintsaina
Fampiasana Fampitandremana momba ny fiarovana
Santionany Fanomezana maimaimpoana
Size 1.22 * 45.7m / horonan-taratasy
halavan'ny 50 metatra / horonana
Faharetana 2-3 taona
Fitaratra ireo taratasy fametaka taratra taratra
Ny fantsom-pitaovana azo taratra dia afaka manome taratra ny hazavana tany am-boalohany teo ambanin'ny jiro tamin'ny jiro headlamp na jiro amin'ny lalana. Heveriko fa mpamily maro no mahalala fa rehefa mitondra fiara amin'ny arabe ianao. Araka ny tondroin'ilay anarana, ny fitaratra dia iray amin'ireo toetra manandanja indrindra amin'ny fitaovana fitaratra. Izy io dia noho ny toetra hita taratra izay ahafahan'ny fitaovana manome taratra manome antoka azo antoka indrindra sy azo antoka indrindra amin'ny alina na amin'ny tontolo ratsy fahitana
Zoro malalaka amin'ny fitaovana fitaratra
Matetika ny fitaovana fitaratra dia manana zoro malalaka kokoa, ka ny lambam-pandinihana misy taratra na lamba taratra dia afaka mitazona vokany tsara taratra, taratry ny hazavana mivantana na dia misy zoro malalaka eo anelanelan'ny sarimihetsika taratra sy jiro.
Ity endri-joro malalaka amin'ny takelaka misy taratra ity dia ampiharina amin'ny famokarana takelaka fifamoivoizana sy ny takelaka misy ny fiara, izay manatsara ny fiarovana amin'ny arabe misy anao, mora azo ny takelaka famantarana.
Ny fantsom-pitaovana azo taratra dia afaka manome taratra ny hazavana tany am-boalohany teo ambanin'ny jiro tamin'ny jiro headlamp na jiro amin'ny lalana. Heveriko fa mpamily maro no mahalala fa rehefa mitondra fiara amin'ny arabe ianao. Araka ny tondroin'ilay anarana, ny fitaratra dia iray amin'ireo toetra manandanja indrindra amin'ny fitaovana fitaratra.
Izy io dia noho ny toetra hita taratra izay ahafahan'ny fitaovana manome taratra manome antoka azo antoka indrindra sy azo antoka amin'ny alina na amin'ny tontolo tsy mahita.
Ireo voalaza etsy ambony ireo dia toetra efatra mahazatra indrindra amin'ny fitaovana fitaratra. Rehefa mamolavola, ny orinasa XW Reflective dia tsy maintsy mandinika ireo teboka efatra ireo ho fitaovana hita taratra, mba hahafahana mampiasa tsara kokoa ireo kasety taratra ireo amin'ny filàntsika isan'andro.
Manaraka: Sarimihetsika translucent